China 330kV M-uhlobo line tower tower Manufacture and Factory | XY Umbhoshongo
1, isevisi yokwamukela amakhasimende. Siyajabula kakhulu ukuthi amaklayenti ethu avakashela iXY Tower. Sithanda ukuhlinzeka abantu abangama-2-3 ngezinsuku ezintathu indawo yokuhlala nolunye usizo oludingekayo kumakhasimende ethu mahhala.
2, Trial inkonzo inhlangano umbhoshongo. Inqobo nje uma amaklayenti edinga insiza yomhlangano wombhoshongo wesivivinyo, noma yini amaklayenti eza efektri noma cha, sizokwenza isivivinyo somhlangano wesivivinyo futhi sithathe ividiyo ukuze isetshenziswe esikhathini esizayo.
3 service Insizakalo yokuvuselela nsuku zonke: Lapho nje isivumelwano sesisayiniwe, kuzokwakhiwa ithimba lezinsizakalo elibandakanya umuntu ovela emkhakheni wezokukhiqiza 、 QC 、. Leli thimba elizinikele lizonikeza umbiko wansuku zonke ngokuxoxa ngeqembu le-WhatsApp noma i-WeChat futhi liphendule noma imuphi umbuzo ovela kumakhasimende ngesikhathi, ukuze amaklayenti akwazi ukuqhubeka nokulandela isimo sokukhiqiza.
Ama-bolts namantongomane angama-4、5% ngaphezulu azohlinzekelwa mahhala ukuqinisekisa ukufakwa.
5, Ngaphandle kwemikhiqizo, iXY Tower izohlinzeka ngezitifiketi nemibiko elandelayo
.Raw Material Report kusuka ensimbi yensimbi
Umbiko we-XY Tower Raw Material Reinspection
Amarekhodi okuhlola izingxenye zamandla wethimba leQC
Imikhiqizo ye-XY Tower efanelekayo ivumela isitifiketi sangaphambili sefektri
Isitifiketi se-XY Tower Esifanelekile
Langaphambilini 330kV double loop transmission tower
Olandelayo: 132kV kabili cirrcuit umbhoshongo oqondile